Wararka - Keydso Lacag Iyo Walwal! Sida Loogu Habeeyo Bacaha Kaabsoosha Kaabsulka Ugu Habboon?
Waa maxay “bacda la isku qurxiyo ee kaabsulka”?
Waxay la mid tahay “wardrobe kaabsulka” oo qof walba inta badan waco. In kasta oo aysan ku jirin boorsadan qurxinta alaab aad u badan, haddana waxaa ku jira "waxyaabaha aasaasiga ah" ee lagama maarmaanka u ah qurxinta maalinlaha ah.
Badeecadaha halkan ku yaal badiyaa waa badeecooyin isku -dhafan oo wax -ku -ool ah, isbarbar -dhigga midabka aad looma buunbuunin, si kasta oo loo waafajiyo, ma fududa in "onkodka lagu tallaabsado".
Hagaajinta "bacda la isku qurxiyo ee kaabsal" ma dhaafi karto oo keliya habka xulashada alaabada inta lagu jiro qurxinta, waxay si weyn u hagaajineysaa hufnaanta qurxinta, laakiin sidoo kale waxay ka dhigaysaa fikirkayaga ka hor qurxinta.
Dabcan, waxay kuu keydin doontaa lacag haddii aadan dooran badeecado leh shaqooyin nuqul ah ama aan loo baahnayn!
Bacda qurxinta oo dhammaystiran waxay ka koobnaan doontaa aasaas, qalin qalin sunne, indho -ku -yaal, hooska indhaha, mascara, lipstick, ka -soo -bax iyo qurxin, 8dan qaybood ee badeecadaha ayaa lagu daray.
Sidaa darteed, waxaan ku talinayaa dhowr alaab oo si sahlan loo isticmaali karo nooc kasta oo badeecooyin ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad doorato midka kugu habboon qayb kasta.
Erayo -fure: saamayn qurxiyo oo dhammaystiran oo dabiici ah, cad, oo muujinaysa
Habka xulashada: Alaabooyinka qurxinta ee salka ku leh qaybtaan waa kuwo aad u jilicsan, umana baahnid farsamooyin qurxiyo oo gaar ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad doorato hadba nooca maqaarkaaga.
ps. Haddii aysan jirin badeecad adiga kugu habboon, waxaad sidoo kale raadin kartaa badeecadaha sumadaha kale ee ku saleysan "furayaasha muhiimka ah".
Erayo -fure: Qarinta awoodda iyo wada -noolaanshaha qoyaanka, ku habboon maqaarka iin leh
Dhab ahaantii, haddii aad rabto inaad ku abuurto saamayn qurxiyo nadiif ah oo aan iin lahayn maqaarka aan dhammaystirnayn, uma baahnid inaad u baahato tillaabooyin khaas ah oo adag-inaad dooratid aasaaska dareeraha leh awood qarin oo xoog leh iyo fiditaan waa hab gaar ah oo hufan.
Ka dib markii si siman loo faafiyo aasaaska dareeraha ah, waxay leedahay saamayn dabiici ah oo ah "maqaarka kareemka leh". In kasta oo sarkaalku sheegay in ay aad u qallalan tahay oo ay ku qasan tahay maqaar qallalan, haddana ma sahlana in aad iska siibto qurxinta ka dib marka maqaarka dufan leh la dejiyo.
Maqaarka guud ee aan sinnayn, wareegyada mugdiga ah, calaamadaha finanka iyo iinnada kale ee yaryar, aasaaskani si fudud ayuu u dabooli karaa.
Midabka qalinkaan sunneedku waa cawl dhexdhexaad ah, buuxintuna waa dhuuban tahay si sahlanna loogu sawiri karo lammaane "sunnayaasha duurjoogta ah" ee dabiiciga ah.
Marka la barbardhigo qaabkoodii hore ee qalinka sunnaha fiiqan, qaabkan cusub ee “Qalinka Sunta Biyaha” ayaa noqon doona mid dabacsan oo hawlgal ah.
Waxaa intaa dheer, buuxinta qalinkan sunneedka ayaa ah mid dhexdhexaad ah oo adag, kaas oo si gaar ah ugu habboon in la isticmaalo caarada qalinka si loo sawiro saamayn “xididaysan”. Xiaobai ma yeelan doonto wax cadaadis ah si ay u isticmaasho!
Mashiinka indhaha iyo mascara
Erayo -fure: nadiif, iftiin
Habka xulashada: Horudhaca jecel qurxinta qaawan ayaa ku filan; haddii aad rabto indhashareer ka dheer oo aad u muuqda, labadoodaba waad wada isticmaali kartaa; deeq -bixiyeyaasha aan jeclayn inay ka saaraan mascara -biyo -mareenka si toos ah u doorta mascara.
Dhajintiisa waxaa ku jira fiilooyin badan oo dheerayn kara baalasha. Xataa madoowgii ugu madoobaa, midabku wuxuu leeyahay cabbir cawlan oo gaar ah, saamaynta rinjiyeyntana waxay la mid tahay “nuxurka baalasha” ee dabiiciga ah.
Marka la barbardhigo mascara-joogta caadiga ah, saamaynta badeecadani waa mid dabiici ah, mana sahlana in lagu miyir-beelo dabagalka. Waxaa si gaar ah loogu taliyaa carwooyinka yaryar ee u fudud inay "gacmaha qabtaan" markay cadayayaan baarkooda.
Erayo -fure: dib -u -buuxin fiican, khadad siman
Habka xulashada: Khadadka uu soo saaray qalinka indhashareerka dareeraha ahi waa mid fiiqan oo aad u jilicsan, qalinka indhashareerka jelku wuxuu aad ugu habboon yahay gabdhaha walaalaha ah ee jecel qurxinta fudud.
In kasta oo qiimaheeda loo tixgeliyo mid raqiis ah oo ka mid ah badeecadaha raqiiska ah, haddana waxaa la barbar dhigi karaa alaabada qaaliga ah marka la eego midabaynta, jilicsanaanta biyaha iyo dhammaadka meeshii.
Midabka madow iyo bunni labaduba waa midabo ku habboon qurxinta maalinlaha ah. Midabka bunni ee kanna waa mid aad u fudud, sidaa darteed xitaa "xisbiga naafada ah" ayaa si fudud u xakamayn kara ~
Erayada muhiimka ah: midabka dhulka, midabaynta dhexdhexaadka ah
Habka Xulashada: Ka sokow rinjiyeynta indho-shareerka, palette midab-badan leh ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa qaabaynta. Palette-kan 35-ka ah ee soo socda ayaa leh xulasho hodan ah oo midabyo ah waana ka raqiisan yahay.
Haddii aan ka tagi karo oo keliya indho -indheyaal miiska labiska, markaa doorashadaydu hubaal waxay noqon doontaa tan ugu aasaasiga ah isla markaasna ah midabka ugu badan ee “midabka dhulka”.
Kitaabkan "buug yar oo bunni ah" kuma koobna oo kaliya dhowr maariin oo matte ah oo xoojin kara dareenka dulucda, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay midabyo cad oo cawl iyo caddaan ah oo dhalaalaya.
Iftiiminta iyo buuxinta midabka goynta ee hoose ayaa ku jira booska dhexe, sidoo kale waa mid gaar ah marka loo adeegsado sidii dhiigbax ~
Oo weliba waxay ka kooban tahay bunni dahabi ah oo khafiif ah oo leh '' luul dillaacay '', oo u muuqda mid aad u caqli badan ka dib qurxinta indhaha, waxaadna ku rinjiyeyn kartaa qurxinta indhaha oo qurux badan oo leh lakabyo cadcad iyo dhibco dhalaalaya.
Faruuryaha & Faruur Faruuraha
Erayada muhiimka ah: midabo kala duwan, qaab siman oo si sahlan loo marsado
Habka xulashada: Faruuraha kareemka leh ayaa xoogaa qoyaan ah, iyo carwooyinka jecel ceeryaanta jilicsan waxay dooran karaan dhoobo dibnaha.
Maaha wax caqli-gal ah in dib-u-samayntaani ay caan ku noqon karto muddo dheer-maxaa yeelay midabkani runtii waa dabiici iyo dabeecad ~
Jaleecada hore, midabkiisu waa diirran yahay oo qaawan yahay, laakiin ka dib marka afka la saaro, ma adkaan doonto in la xakameeyo sida caadiga ah "midabka ciidda cunidda". Taas bedelkeeda, waxay si dabiici ah kor ugu qaadi kartaa dareenka dhiigga ee dibnaha.
Kareemka kareemku wuxuu leeyahay xoog dabool leh oo afka ka dambeeya, loomana baahna wax dheerad ah oo dheeraad ah oo loogu talagalay dahaarka dibnaha qoto dheer ~
Dabeecadda ayaa ah in qaab -dhismeedku uu si gaar ah u siman yahay, kaas oo aan haynin oo keliya matte iyo barafoobay saamaynta qurxinta jilicsan ee ceeryaanta ah ee dhoobada dibinta lafteeda, laakiin sidoo kale ka fogaata dareenka qalalan ee ay keento qallaylku.
Erayo -fure: midab -dhexdhexaad dhexdhexaad ah, oo aan ahayn midabka midabka oo aad u sarreeya
Midabkani wuxuu leeyahay dhaldhalaal jilicsan oo waa mid wax -ku -ool ah oo ma aha mid la doorto. Waa lambarka midabka cusub ee midabkooda midab -kala -sooca ah. Midabka miro guduudku wuxuu u muuqdaa mid aad u macaan iyo jawi, sidoo kale wuxuu la mid yahay midabka guud ee qurxinta indhaha ee dhulka. Ciyaar aad u wanaagsan.
Ka sokow midabkan midabka leh, midabyo badan oo magac weyn leh ayaa sidoo kale aad loogu talinayaa.
Erayo -fure: midab khafiif ah, oo ay ku jiraan codad kala duwan
In kasta oo tillaabooyinka jaridda iyo muujinta ay fudud yihiin, haddana farqiga u dhexeeya adeegsiga iyo aan la isticmaalin ayaa aad uga sii daran!
Aad bay u habboon tahay in la isticmaalo “dhaldhalaalka sare ee wax-dhimista oo dhan-ku-jira”, waxayna si toos ah uga tagaysaa tallaabada “isku-duwidda disc” hal midab ah.
Laakiin midabka guud ee saxankani waa xoogaa khafiif ah, iyo farqiga u dhexeeya iftiinka iyo mugdiga aad uma xoog badna. Haddii aad leedahay midab maqaar oo madow, waxaad kaloo raadin kartaa taargooyin kale iyadoo la raacayo fikradda badeecadan.
Waqtiga dhejinta: Aug-10-2021
Jeexa indhaha, dibinta, Kordhinta Indhaha, Iibiyeyaasha Indhaha, indho -dejiye, jeedal mink,